‘Inopolitiko into yokubanjwa kwalomfundi’ - Abafundi bathethelela obanjwe enxibe impahla yomkhosi - Vernac News
‘Inopolitiko into yokubanjwa kwalomfundi’ – Abafundi bathethelela obanjwe enxibe impahla yomkhosi
January 24, 2019 May 3, 2020 Vernac News
EKapa – Abafundi beYunivesithi yaseNtshona basola ifuthe lepolitiki njengonobangela wokubanjwa kuka Aseza Mayaphi (20) emva kokubhaqwa enxibe impahla yangentla yomkhosi wokhuselo weli.
Aba bafundi bakutsho oku xa bebeyokuxhasa u-Aseza Mayaphi, owenza izifundo zobugqethwa e-UWC, xa ebeyokuvela kwiNkundla kaMantyi yaseBellville ngoLwesine.
UMayaphi ujongene nezityholo zokunxiba nokugcina ngokungekho semthethweni impahla yomkhosi wokhuselo weli i-SANDF.
UMayaphi uxelele inkundla ukuba umbutho wakhe we-Economic Freedom Fighters umqashele igqwetha labucala kodwa khange likwazi ukuphumelela enkundleni namhlanje. Inkundla imyalele ukuba aphinde avele ngomhla we 28 EyoKwindla 2019.
Encokola nonoondaba ngaphandle kwenkundla uMayaphi uthe impahla lomntla ebewunxibile xeshana esenza udliwano-ndlebe kunye ne-eNCA awungowomkhosi wokhuselo kwaye awunayo iflegi okanye iimpawu ze-SANDF.
uSankara Bizela uthe lemeko inalo ifuthe lopolitiko ngoba xeshana avela kumabonakude uMayaphi ubenxibe ibhareti ye-EFF.
“Yinkcitha xesha nemali karhulumente le ngoba baninzi abantu abanxiba iimpahla ezinemibala yamajoni, lamajoni makenze umsebenzi wawo qha”
Umkhosi Wokhuseleko weli ukhuphe ingxelo egxeka kanobom abantu abanxiba iimpahla yomkhosi ngelithi bonyelisa imikhosi yokhuselo yeli.
“Sifuna ukukhumbuza uluntu ukuba aluvumelekanga ukunxiba iimpahla efana okanye eyemikhosi yokhuselo yeli. Ezimpahla zezokusetyenziswa ngokwesikweni ngamajoni weli kuphela kunye nabo bathe bawongwa”
“Nabani na ofunyaniswa enxibe ezimpahla abe engelojoni lomkhosi weli okanye umntu onikwe iwonga abe engaqeshwanga yintloko yomkhosi wokhuselo weli uzakuba wophula umthetho woMzantsi Afrika,” iqhubeke yatsho lengxelo.
Icandelo 104 (5) ne (6) loMthetho woKhuselo we-42 ka 2002 weli lithi “Nabani na ofunyaniswa egcine okanye enxibe iimpahla eneempawu zemikhosi yokhuselo uzakujongana netyala apho, athe akugwetya, ohlwaye ngentlawulo okanye avalelwe iminyaka engagqithanga kwisihlanu.
Tagged EFFSC UWC, SANDF, UWC
Uzakuvela enkundleni umfundi obenxibe impahla yamajoni
On BLF’s Demanding the Impossible